परिवर्तनलाई नकार्न सकिन्न -जीवन खत्री
सल्वार्टन आवाजलाई बाहिर सबैले बुझ्ने गरि लेख्नु पर्दछ
माघ ७, २०७५ मनु बिद्राेही
कवि जीवन खत्री
साहित्यकार जीवन खत्री स्कुल लेभलबाट नै कविता विधाबाट साहित्यमा प्रवेश गर्नु भएको हो ।२०६३ सालदेखि अझ बढी सक्रिय भएर साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाईरहनु भएको छ ।रेडियो नेपालको मधुवन कार्यक्रम सुनेर प्रभावित भएपछि उहाँलाई साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा मिलेको हो । उहाँले कविता ,गित ,गजल,मुक्तक,हाईकु,कथा र निबन्ध लेख्नुहुन्छ ।उहाँ मधुवन साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
संस्थापक अध्यक्ष हुदा देशै भर संस्थाको शाखा विस्तार गर्नुभयो, विभिन्न साहित्य कार्यक्रम गर्नुभयो र नयाँ पुस्तालाई सिक्ने सिकाउने कार्यक्रमको आयोजना गरेर पछिल्लो समयका चर्चित साहित्यकारहरुको साहित्य यात्राको पहिलो खुड्किलो टेक्न सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनु भयो । उहाँ हाल पनि यसै संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रव्यापी कविता प्रतिगिता, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय २०६९ र अन्तर्राष्ट्रिय कविता महोत्सव ,नेपाल साहित्य प्रतिष्ठान उत्तर अमेरिका सन २०१२ गरि एक दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ ।उहाँको २०६५ मा "मेरो शिखर टाढा छ" र २०६९ मा "जीवन कसका लागि " गजल सङ्ग्रह र २०७५ मा "आगोको वर्णमाला" कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छन । उहाँसंग सारङ्गी न्यूजकाे लागि मनु बिद्राेहीले गरकाे कुराकानी :
मनु :- तपाईं आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
जीवन :- आगोको वर्णमाला भर्खरै बजारमा पुग्यो । केही पाठकहरूको धारणा सुन्न पढ्न पाउँदै छु । केही कार्यक्रमहरूमा निम्ता आएको छ । समग्रमा आगोको वर्णमालामै केन्द्रित भएर समय बिताई रहेको छु ।
मनु:- तपाईंको विचारमा साहित्य के हो?
जीवन:- मेरो लागि साहित्य धेरैथोक हो । ज्ञान दिने बाआमाजस्तै । धेरै शिक्षाका कुरा सिकाउने गुरूहरूजस्तै । प्रेम गर्ने प्रेमिकाजस्तै । हरेक सुख र दु:खमा साथ नछाड्ने साथीजस्तै । धोका दिने आफन्तजस्तै । अझै धेरै धेरै थोक हो साहित्य मेरा लागि ।
मनु: साहित्य सिर्जना के को निम्ति गर्नुहुन्छ ?
जीवन:-म जीवनको सर्वोच्च आनन्द पाउन लेख्छु । जब कुनै अप्ठ्यारा सपठ्याराका कुरा हुन्छन्, जब असाध्यै धेर दु:ख वा सुखकै कुरा पनि हुन्छन् म बात मार्न सक्ने भनेको साहित्यमै हो । म यथार्थ लेख्न मन पराउँछु । मैले लेखेका रचनाहरूमा कतै आदर्शका कुरा आईहाले भने पनि त्यो आवश्यकता अनुसार मात्र ह‍ो । जवर्जस्त मन पर्दैन् ।
जीवनः- एक दशक अघिको साहित्य र आजको साहित्यमा उस्तो ठूलो भिन्नता केही भएको छैन् लेखनका हिसाबले । र फरक नभएकै भन्न पनि सकिन्न । त्यो बेला देशको अवस्था पनि बिकराल थियो । अहिले सङ्लिदै छ । त्यसले साहित्यलाई पनि असर पारेकै हो । क्राफ्टका कुरामा केही अन्तर भएको छ । बौद्धिक पाठक थपिएका छन्, चलेकै लेखकका किताब पनि फ्लप भएका छन् नयाा लेखकले आफ्नो परिचय स्थापित गरेका छन् ।
बजारमा केही नयाँ प्रकाशक थपिए । राम्रो लेख्ने नया लेखकले स्थान पाए । लेखकले पारिश्रमिक सहित कार्यक्रममा निम्ता पाउन थाले । अनुवादको काम थपिए । विश्व बजारमा केही पुस्तकहरू अनुदित भएर पुगे । समग्रमा राम्रो हुँदैछ बिस्तारै ।
साहित्यकार जीवन खत्री
मनुः- हाल विकास भएको सुचना प्रविधि र यसले नेपाली साहित्यलाई कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ?
जीवन:- हरेक कुराको राम्रो र नराम्रो कुरा हुन्छ । सूचना प्रविधीले असाध्यै राम्रो भूमिका खेलेको छ । ठूला मिडिया हाउसहरूको एकात्मक दबदबा केही हदसम्म तोडेको छ । प्रतिभा भएका नयाँहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाएका छन् र बनेका छन् सेलिब्रेटी । यो राम्रो कुरा हो । यसलाई सही सदुपयोग गर्नु पर्छ हामीले ।
मनुः- पुरुष लेखक भन्दा महिला लेखकको संख्यामा कमि देखिनु र पुरुष लेखक भन्दा महिला लेखक पछाडी पर्नुको मुख्य कारण के होला?
जीवनः- यो प्रश्नको उत्तर चाँही सबैभन्दा बढी महिला लेखकहरूलाईनै थाहा हुन्छ । मेरा धारणामा हाम्रो समाज पृतिसतात्मक अवस्थाबाट उठेकै छैन । बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ । केही समय जरुर लाग्छ । तैपनि राम्रो लेखेर आउने थुप्रै महिला लेखकका नामहरू छन् ।
मनुः- कतिपयलाई मिडियाले साहित्यकार बनाइदिएको छ भन्छन् नातावाद र कृपावादको प्रभावले साहित्यलाई कस्तो असर पर्ला ?
जीवन:- त्यो सत्य हो । तर मिडियाले बनाउँदैमा साहित्कार हुँदैन् । हुने भए लेख्न छोडेर मिडियाकर्मी बने हुन्छ नि त । अथवा मिडियामा कामका अलवा साहित्य लेख्नेहरू थुप्रै लेखकहरू पनि गुमनाम छन् । सत्य कुरा के भने, मिडियाले जनतासामु छिटो पुर्याउँछ लेखकलाई जब पाठकले उसका सृजना मन पराउँछन्, त्यो बाँच्छ जब पाठकले उसका सृजना मन पराउँदैनन् उ सकिन्छ । मतलब राम्रो लेखननै प्रमेख कुरा हो । नातावाद कृपावाद पनि त्यही हो ।
जीवन:- समाजकै कुरा लेख्ने हो । समाजका विकृति विसंगतिका कुरा उठाएर लेख्ने हो । सल्वार्टन आवाजलाई बाहिर सबैले बुझ्ने गरि लेख्ने हो भने समाज परिवर्तनमा जरुर सहयोग पुग्छ । आफ्नो सृजनाले समाजमा चेतनाको पर्वाह हुने हो भने असम्भव भन्ने कुरा के छ र?
जीवन:- राज्यले धेरै काम गर्न सक्छ । लेखकहरूलाई साहित्य महोत्सव गरीदिने । राम्रा किताबहरू छापिदिने । लेखकहरूलाई वर्गिकरण गरेर तलब भत्ताको ब्यवस्था गरेर उनीहरूलाई निरन्तर लेखिरहने वातावरण बनाईदिने । निश्पक्ष तरिकाले पुरस्कार दिने । सम्मान पाउन योग्यलाई मात्र दिने । निजी साहित्यिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम गर्ने आदी आदी...।
मनुः- आजभोलि नेपाली साहित्यमा आगन्तुक शब्दहरू बढी नै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ यस्तो प्रवृतिले के कस्तो असर पर्न सक्छ?
जीवन:- रियालिटि लेख्ने हो भने जे छ त्यही लेख्ने हो । परिवर्तनलाई नकार्न सकिन्न । कुन समयमा के कस्तो छ अवस्था भनेर बुझ्न पनि त्यही लेख्नु पर्छ । तर फरक लेख्ने बहानामा अनावश्यक र समाजमा प्रयोगनै नहुने आगन्तुक शब्द प्रयोग गर्ने हुँदा चाँही नकाम हुन्छ । ती लेखकहरू आफैँ छाटिन्छन् ।
जीवन:- के कुरा विवादित बनेको हो भन्ने कुरामा म स्पष्ट हुन सकिन् । सबै बिधाको आफ्नै महत्व, शैली र त्यसले बनाएक‍ो बाटो छ । आफ्नो चाहना, रुची कता पट्टी हो? आफूलाई के कुराले आकर्षित गर्छ त्यतैको बाटोमा हिँडदा सफलता पाउने सम्भावना धेर हुन्छ । आफूलाई मन परेका देशी विदेशी लेखकहरूको कृतिहरू धेरै भन्दा धेरै अध्ययन गर्नु, निरन्तर लेख्न कोसिस गर्नु । सकारात्मक प्रतिक्रियालाई सहजै ग्रहण गर्नु र लेखनमा जिम्मेवारी बोध गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मनु:- अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र भन्न मन लागेको कुरा केहि बाँकी छ कि?
जीवन:- छुटाउनु भएजस्तो लागेन् । भर्खर बजारमा "आगोको वर्णमाला" आएको छ । कविता पारखीहरूमा अनुरोध गर्दछु, पढीदिनुस र मनमा जे लाग्छ नढाँटी प्रतिक्रिया दिनुहोस् म पर्खनेछु । मेरा केही धारणा राख्न यो अवसरका लागि सारङ्गी न्यूज र मनुजीलाई धन्यवाद ।
सोमवार, माघ ७, २०७५, ०९:०१:००